ရန်ကုန်သွားမယ့် မောင်ပေ (၃) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » ရန်ကုန်သွားမယ့် မောင်ပေ (၃)
ရန်ကုန်သွားမယ့် မောင်ပေ (၃)
Posted by မောင် ပေ on Dec 3, 2011 in Creative Writing, My Dear Diary | 8 comments
ကားသမား ငတိ လစ်ပြေးသွားပြီးနောက် ၊ ဟိုတယ်ထဲသို့ ဝင်ကာ အခန်းငှားလိုက်သည် ။ ထို့ နောက် ဂေဇက်မှ မိတ်ဆွေ ကိုဘီလူး ထံ ဖုန်းဆက်ပြီး အကျိုးအကြောင်း ပြောပြလိုက်သောအခါ ၊ သူ ချက်ချင်းလာခဲ့မည် ဟု ပြောသည် ။
သည်လူ က ခေသူမဟုတ် ၊ လက်ဝှေ့ ၊ ကရာတေး ၊ တိုက်ကွမ်ဒို အစုံတတ်မြောက်ထားသည် ဟု သိရသည် ။ ရန်ကုန်မြို့ ရှိ ခါးပိုက်နှိုက် များဆိုလျှင် ၊ သူ့ ဓါတ်ပုံကို ဗီနိုင်းထုတ်ထားကာ ၊ သူနှင့်ဆုံသော ကားပေါ်တွင် မလှုပ်ရှားကြရန် သတိပြုကြသည် အထိပင် ။ နောက်ပြီး သည်လူ၏ ဝတ်စားပုံမှာ အမြဲတမ်း ဝတ်စကုတ် တစ်ထည်ပါသည် ။ ရဲလား ဆိုတာကိုတော့ သူ့ ကိုမေးရမည် မှာ အားနာသဖြင့် မမေးဖြစ်ခဲ့ ။
ဟော်တယ် မှာ ရေချိုးပြီး၊ဧည့်ခန်းမှစောင့်နေစဉ် ကျွန်ုပ်ထံ ဖုန်းဆက်လာသူမှာ ၊ ကျွန်ုပ်တို့ ဂေဇက်မှ တံခါးစောင့်ကြီး ဘလက် ။ ခဏနေကြ ဂေဇက်မှ ကိုလင်းမြွေ ဖုန်းဆက်လာသည် ။ သူတို့ ကို လည်း အကျိုးအကြောင်း ပြောပြလိုက်သောအခါ ၊ သူတို့ လည်း ချက်ချင်းလာခဲ့မည် ဟု ပြောသည် ။
ဒါမျိုးကြ ကျွန်ုပ်တို့ ဂေဇက်ဝင်တွေ သွေးစည်းညီညွတ်ကြသည် ။
၁၅မိနစ်ခန့် ကြာသောအခါ ၊ ဟိုတယ်ဧည့်ခန်းအတွင်းတွင် ဂေဇက်ဝင် သုံးဦးနှင့် ကျွန်ုပ် မောင်ပေ နှင့် ဆုံကြလေတော့သည် ။
ကိုဘလက် နှင့် ကိုလင်းမြွေ တို့ ပုံစံမှာ အရပ်မြင့်မြင့် ၊ ဘော်ဒီက ခပ်တုတ်တုတ် နှင့် မစ်ဒယ်ဝိတ် ဘောက်ဆင်သမားများကို တွေ့ ရသည့် အတိုင်း ။
တွေ့ တွေ့ ချင်း သူတို့ သုံးယောက်လုံး ၊ ကျွန်ုပ်ဖြစ်ပုံကို အသေးစိတ်မေးမြန်းကြသည် ။
ကားသမား ပုံစံက ရှမ်းကုလား ရုပ်ဗျ ၊ အရပ်ကတော့ ၅ပေ၆ လောက်ရှိမယ် ။ လူပုံက ခပ်သန့် သန့် ဘဲ ။ တက္ကစီမောင်းတယ်လို့ ကို မထင်ရဘူး ။ သူ့ ကားကလဲ ကော်ရိုလာဗင်ဗျ ။ မော်ဒယ်တော့ မသိဘူး ။ ကားနံပါတ်လဲ မမှတ်မိဘူး ။ ကားက သန့် တယ် ။ တက္ကစီဆိုင်းဘုတ်တင်ထားတဲ့ နံပါတ်အနီကား ဆိုတာတော့ သေချာတယ် ။
ကိုဘီလူး က ရန်ကုန်မြောက်ပိုင်းတစ်ခွင် တွင် သွားစုံစမ်းမည် ဟု ဆိုကာ ထွက်သွားသည် ။
ကိုလင်းမြွေ က ရန်ကုန်မြို့ ထဲ ကို သူ့ တာဝန်ဟု ဆိုကာ ထွက်သွားသည် ။
ကိုဘလက် ကတော့ ကျွန်ုပ် သွားလိုသည့်နေရာများကို လိုက်ပို့ ရင်း ၊ ကျွန်ုပ်နှင့် အတူ စုံစမ်းမည် ဟု ဆိုသည် ။
ကိုဘလက်နှင့် ကျွန်ုပ်လည်း လဘက်ရည်ဆိုင်တစ်ဆိုင် သို့ ဝင်ထိုင်ပြီး မနက်စာစားကြသည် ။
“ ကိုပေ့ စာအုပ်တွေ က တော်တော်များလားဗျ ”
“ များဆို ကိုးယောက်စာ ပေါ့ဗျာ ၊ ဒီမှာ ကိုဘလက်တို့ ကိုဘီလူးတို့ ကိုလင်းမြွေ တို့ လို ဘော်ဒါတွေ ကို ပေးဖို့ ၊ ၉ ယောက်စာ ခန့် မှန်းပြီး ဝယ်ခဲ့တာဗျ ”
“ ဒါဆို နှမြောစရာကြီးဗျာ ၊ ဒါနဲ့ ကိုပေ စီးခဲ့တဲ့ ကားက တော်တော်လေး သန့် လား ”
“ အင်း..သန့် တယ်ဗျ ၊ အတွင်းခန်းကော အပြင်ပိုင်းကော ၊ နောက်ပြီး အခုမှ မှတ်မိပြီ ၊ အဲ့ကောင် ဝတ်ထားတဲ့ပုံစံကို ၊ ရှပ်အင်းကျီနဲ့ စတိုင်ပန် နဲ့ နက်ကတိုင်နဲ့ ဗျ ”
“ ခင်ဗျားစီးခဲ့တာ တက္ကစီကော ဟုတ်ရဲ့ လားဗျာ ”
“ ဟုတ်ပါတယ် ၊ တက္ကစီ ဆိုင်းဘုတ် တပ်ထားတာတော့ သေချာပါတယ် ”
“ အေးဗျာ ၊ စိတ်တော့ မပျက်ပါနဲ့ ဦး ၊ ကျုပ်မှာလဲ အသိရဲတွေ၊စုံထောက်တွေ အပတ်အသက်တွေ အများကြီးရှိပါတယ် ၊ ဒါပြီးရင် သူတို့ ဆီ သွားပြီး စနည်းနာကြည့်ရအောင် ”
“ အေးဗျာ..ကျုပ်က ဒီမှာ သူစိမ်းတစ်ယောက် ဆိုတော့ ၊ အကိုတို့ ကိုဘဲ အားကိုးရမှာဘဲ ”
မနက်စာ စားအပြီး ကျွန်ုပ်တို့ နှစ်ယောက် ၊ ကိုဘလက် မိတ်ဆွေ၏ အိမ်သို့ သွားခဲ့ကြသည် ။
ရုံးမသွားမှီ အချိန်မှီအောင် ဟု ဆိုကာ ကိုဘလက်က သူ့ ကား ကို အမြန်ဆုံး မောင်းလာခဲ့သည် ။
ကိုဘလက် မိတ်ဆွေအိမ်ရောက်တော့ ၊ အိမ်ထဲအဝင် ၊ ရုံးသွားဖို့ ပြင်နေတဲ့ သူ့ ကို တန်းတွေ့ ရတယ် ။ ပုံကြည့်ရတာ အရာရှိတစ်ယောက်ပါဘဲ ။ ဒါနဲ့ကိုဘလက် က ကျွန်ုပ်တို့ ရောက်လာရတဲ့ အကြောင်းစုံကို ပြောပြလိုက်တော့ ၊ အဲဒီလူ က တန်းသိတယ် ။
ချက်ချင်း သူ့ ဖုန်းထုတ်ဆက်တယ် ။ ကြည့်ရတာ သူ့ တပည့်များကို လှမ်းညွှန်ကြားနေတဲ့ပုံဘဲ ။
ပြီးတော့ ကျွန်ုပ်ကိုမေးတယ် ။ ရန်ကုန်က ပြန်ရင် ဘာနဲ့ ပြန်မလဲ တဲ့ ။ ကျွန်ုပ် လည်း လေယာဉ်နဲ့ ပြန်မှာ ဖြစ်တဲ့အကြောင်း ပြန်ပြောလိုက်တော့ ၊ လေယာဉ်လက်မှတ် ဝယ်ပြီး ပြီလား လို့ မေးတယ် ။ မဝယ်ရသေးဘူး လို့ ဆိုလိုက်တော့ ၊ နေ့ လည် တစ်နာရီ ၊ မင်္ဂလာဒုံလေဆိပ်မှာ တွေ့ ကြဖို့ ချိန်းလိုက်တယ် ။ သူက လေယာဉ်လက်မှတ်ဝယ်ဖို့လိုက်ကူညီပေးရင်း ကျွန်ုပ်၏ စာအုပ်များပြန်ရဖို့ အဲဒီမှာ ဆုံမယ် တဲ့ ။
ဒါနဲ့ မယုံတစ်ဝက် ၊ ယုံတစ်ဝက် နဲ့ ကိုဘလက်နဲ့ ကျွန်ုပ် ပြန်လာခဲ့ကြသည် ။ ကျွန်ုပ် မိတ်ဆွေ ၏ မင်္ဂလာဆွမ်းကျွေးပွဲ သို့ ရောက်ဖြစ်ခဲ့သည် ။ ထို့ နောက် အချိန်ရသေးသဖြင့် ရွှေတိဂုံဘုရား သို့ သွားဖူးခဲ့သည် ။ ဘုရားဖူးရင်း ကျွန်ုပ် စာအုပ်များ ပြန်ရပါစေ ဟု ဆုတောင်းမိသည် ။
ဘုရားပေါ်မှ ပြန်အဆင်းတွင် ၊ ကိုလင်းမြွေ ၏ ဖုန်းဝင်လာသည် ။ ကျွန်ုပ်ထံမှ လစ်ပြေးသွားသော ကားပုံစံကို သူ့ မိတ်ဆွေ ဖော်ရိန်နာများ တွေ့ ဖူး စီးဖူးကြကြောင်း သိရသည် ဆိုသည့်အကြောင်း ပြောလာသည် ။ လေဆိပ်နား တစ်ဝိုက်တွင် သွားရှာကြည့်ဖို့ 
အကြံပြုလာသည် ။ တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်ပင် ၊ ကျွန်ုပ် လည်း ကိုဘလက်နှင့် အတူ ၊ ကိုဘလက် မိတ်ဆွေနဲ့ လေဆိပ်တွင် ချိန်းဆိုထားကြောင်း ပြောပြလိုက်သောအခါ ၊ ကိုလင်းမြွေ လည်း ဝမ်းသာသွားသည် ။
နေ့ လည် တစ်နာရီကျတော့ ၊ ကိုဘလက်နှင့်အတူ မင်္ဂလာဒုံလေဆိပ်တွင် သို့ အရောက် ၊ လေဆိပ်အပြင်ဘက်တွင် ရပ်ထားသော ကားပါကင် တွင် ဘက်ကီး ငတိ ၏ ကားနှင့် ဆင်တူသော ကားတစ်စီး ကို တွေ့ လိုက်ရလေသည် ။
သေချာအောင် အနီးကပ် သွားကြည့်တော့ ၊ မနက်က စီးလာသောကားသေချာသည် ။ ကိုဘလက် မိတ်ဆွေ အရာရှိ ကို လှမ်းမြင်ရသဖြင့် သူ့ ဆီ အရင်သွားပြီး ကားတွေ့ ကြောင်းပြောပြလိုက်သော အခါ ၊ ထိုသူ က ချက်ချင်း ဆိုင်ရာများကို ဖုန်းဆက်လိုက်သည် ။
ကိုဘလက်မိတ်ဆွေ က အရာရှိတစ်ဦးဖြစ်ပြီး လေယာဉ်လက်မှတ် မကြာခဏ ဝယ်နေကြမို့ ၊ လေယာဉ်လက်မှတ် ကို ဈေးမှန်ဖြင့် ဝယ်လို့ ရသည် ။ ထို့ နောက် လေဆိပ်အတွင်းရှိ ဘားတွင် ဝင်ထိုင်လိုက်ကြပြီး ၊ အခြေအနေ ကို မေးလိုက်သော အခါ ၊ ကိုဘလက် နှင့် သူ့ မိတ်ဆွေ အရာရှိ တို့ က ပြုံးပြပြီး စောင့်ကြည့်ပါ ဟူသော မျက်နှာမျိုးကို တွေ့ လိုက်ရသဖြင့် ၊ ဘီယာတစ်လုံးမှာကာ သောက်နေလိုက်သည် ။
ဘီယာတစ်လုံးကုန်ချိန်လောက်တွင် ၊ ကျွန်ုပ်လည်း လေဆိပ်အတွင်း တစ်ချက် လှည့်ကြည့်နေစဉ် ၊ တွေ့ လိုက်ရပါပြီ ၊ ဘက်ကီးငတိ ကို ၊ သူ့ ဘေးမှာ ထောင်ထောင်မောင်းမောင်း လူနှစ်ယောက် က လက်တစ်ဘက်စီ ကိုင်ဆွဲကာ ဝင်လာသည် ကို တွေ့ လိုက်ရလေတော့သည် ။
( ဆက်လက်ရေးသားပါဦးမည် )
***** ကျွန်ုပ် ၏ အရည်မရ အဖတ်မရ ခရီးသွားမှတ်တမ်းကို သည်းခံ ဖတ်ပေးသည့်အတွက် လေးစားကျေးဇူးတင်ပါသည် *****
မောင်ပေပိုစ်ကို ဖတ်ပြီးသကာလ ကျွန်ုပ်၏သတင်းပေးများမှတစ်ဆင့် စုံစမ်းသောအခါ
မောင်ပေ၀ယ်လာသော ပုံစံတူ စာအုပ်ကိုး စုံကို ဘီယာဆိုင်ရှေ့တွင်ဈေးကွက်စီးပွားရေးအရ
အရောင်းမြင့်တင်နေသော ဘယာကြော်ကုလားထံတွင်လာရောက်ရောင်းချစဉ် ဖမ်းဆီးရမိပါကြောင်း။
၄င်းစာအုပ်များကို ပြန်လည်ရယူလိုပါက ခရီးစရိတ် ကုန်ကျငွေကျပ်ငါးသိန်းတိတိပေး၍ စာအုပ်များကို
မနက်ဖန်ကြ အဆုံးသတ်ပါမယ် ဗျာ
ဘယ်သို့ ဘယ်ပုံ ဘယ်လို ဘာညာ ဆိုတာ
ကိုမောင်ပေရေ. အကို့ စိတ်ကူးထဲကဇာတ်လိုက်ကျော်တွေရဲ့ အစွမ်းကအံ့မခန်းပါလား!!!!!!!!!
ကိုရင်ပေ တို့များ အစဆွဲထုတ် ထားပြီးမှတော့သည်းခံဖတ်တာကိုကျေးဇူးတင်မနေပါနဲ့ဗျာ..
မြန်မြန်လေးသာ အလစ်သမားကို ပွဲထုတ်ပါတော့..
ဒီလူ့နှယ် မလာခင်ထဲကို ရန်ကုန်က ကားသမားတွေကိုလန့်ပါတယ်ဆိုတဲ့
ကိုပေလို လူကိုမှ လုပ်ရက်ပလေတယ်ဗျာ…
ကိစ္စပြီးခါနီးမှ လူမိသလို ဆန့် ငင်ကြီးဗျာ ။
ကားသမားက ကျောက်စိမ်းထုပ်နဲ့ ..မှားဆွဲမိသွားတာနေမပေါ့
ကျုပ်လည်း စီအိုင်အေ ထောက်လှမ်းရေး ဂြိုလ်တုနဲ့ဆက်ပြီး မောင်းသူမဲ့လေယာဉ်ပျံကတဆင့် လိုက်ကြည့်တာပဲ။ မိခါနီးမှ လူတွေရှုပ်နေလို့ လွှတ်ပေးလိုက်ရတာ။ နောက်ဆို ဘလက်တို့ ဘီလူးတို့ ဘလက်အသိ ဘလာတို့ကို ပြောထားဗျာ၊ ကျုပ်လိုက်နေတဲ့ ကေ့စ်ဆိုရင် ပစ်မှတ်နဲ့ ကိုက်သုံးရာ အကွာမှာ နေပေးပါလို့။ မတော်လို့ မိုးပေါ်က ကျလာတဲ့ ဥက္ကာခဲဝင်ဆောင့်မိရင် ကြောင်ကြီးတာဝန် မဟုတ်ဘူး…..။ :cool:
မောင်ပေ တို့ကတော့ စုံထောက်ဝတ္ထုရေးလို့ရပြီ။ မင်းပေသောက် ဆိုပြီးတော့…ဟားးးဟားးး